कस्तो आज तपाईँको भाग्य ? हेर्नुस् राशिफल – Khabar Silo
वि.सं.२०७६ भाद्र २१ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०७ तारिख ।
भाद्रपद शुक्ल (ञँलाथ्व) नवमी, ज्येष्ठा नक्षत्र, बृश्चिक राशिको चन्द्रमा, प्रीति योग, बालब र कौलव करण ।
आजको चाडपर्व र उत्सवः अदुःख नवमी व्रत, अविधवा नवमी ।
मेष राशी हुनेहरुको आज आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछ । गरेका कामबाट फाइदा मिल्नेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्न बाँकी रकम उठ्ने योग छ ।
कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा पुग्नेछ । पितृधनको उपयोगबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । रोकिएका काम बन्नाले आम्दानी बढ्नेछ । मनमा उत्साह बढ्नेछ ।
वृष राशीहुनेहरुको लागि आज उत्साह र जाँगरमा कमी आउनेछ । लगानी र श्रमको उचित मूल्यांकन नपाइन सक्छ । समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्च मात्र बढ्नेछ ।
आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनेछ । प्रयत्न गर्दा पनि रकम उठाउन सकिदैन ।
मिथुन राशी हुनेहरुको आज ईष्र्या गर्नेहरुले सताउनेछ । सोचेको काम नबन्न सक्छ तर कृषि तथा पशुपालनबाट भने सोचेको लाभ पाइनेछ।
कडा मेहनत र लगनशीलताका कारण रोकिएको काम बन्ने देखिन्छ । प्रयास गर्दा नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने समय छ ।
यस राशी हुनेहरुको आज पर्यत्न गर्दा समय सदुपयोग हुनेछ । आश मारेका धन हात लाग्न सक्छ । उद्योग र व्यापारमा फाइदा मिल्ने योग छ ।
काममा सोचेजस्तो लाभ मिल्नेछ । नयाँ काम शुरु गर्ने समय छ । प्रतिष्ठित काम गरेर अरुलार्य आकर्षित गर्न सकिनेछ ।
यस राशी हुनेहरुको आज सोचेको काम बन्ने योग छ । प्रतिष्ठा कमाउने समय छ । भाग्यले नसोचेको फाइदा दिनेछ ।
भविष्यमा जग बसाउने काम शुरु हुनेछ । कामको अवसर पाइनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछ ।
कन्या राशी हुनेहरुका लागि काममा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेनदेनमा कारणले विवाद आउन सक्छ ।
आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुने योग छ । कामको उचित मूल्यांकन नहुन सक्छ । प्रयत्न गरेको काम समयमा सकिदैन ।
यस राशी हुनेहरुका लागि आज आत्मबल र उत्साह बढ्नेछ । उम्किन लागेको काम पनि बन्ने योग छ । गरेको प्रयास सफल बन्नेछ ।
व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ । व्यावसायिक यात्राको संभावना छ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ ।
वृश्चिक राशी हुनेहरुका लागि भविष्यका लागि जग बसाउने समय छ । मातृधन र पैत्रिक सम्पत्तीको उपयोगबाट सामान्य लाभ लिन सकिनेछ । पशु धन र जमिबाट पनि सामान्य फाइदा मिल्नेछ । व्यापारमा पनि सामान्य फाइदा हुनेछ ।
गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । आम्दानी सामान्य भए पनि खाँचो टर्नेछ । तत्काल ठूलो फाइदा भने नहुन सक्छ । हतारमा गरेको निर्णयबाट घाटा हुन सक्छ ।
धनु राशी हुनेहरुका लागि आज सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै फाइदा लिने योग छ । जिम्मेवारी बढ्नेछ । किर्तिमानी काम गरेर प्रतिष्ठा कमाउने समय छ ।
उद्योग तथा व्यापारमा विशेष फाइदा पुग्नेछ । आर्जित धनको दीर्घकालिन उपयोग हुनेछ । पुरानो समयको उपयोग हुनेछ ।
मकर राशी हुनेहरुका लागि आज बनिसकेको काम विग्रन सक्छ सचेत हुनुहोला । काममा लगानीको समय छ । आशा देखाउनेहरुबाट धोका पाइन सक्छ ।
व्यवसायिक काममा खर्च बढ्ने योग छ । सेवामुलक काममा प्रतिष्ठा मिल्ने देखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ ।
यस राशी हुनेहरुका लागि आज परोपकारी तथा सामाजिक कामबाट प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काम पुनः शुरु गर्ने समय छ । नाम र दाम आर्जित गर्ने समय छ ।
सहयोगीहरुले अप्रत्यासित सहयोग गर्नेछन् । दिर्घकालिन प्रयोजनमा धन खर्च हुनेछ । धैर्य र लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ ।
यस राशीका लागि आज मिश्रित प्रभाव देखिन्छ । व्यवसायको सन्दर्भमा टाढाको यात्रा हुन सक्छ । अनायासै खर्च बढ्ने समय छ । वै
देशिक कामबाट भनेजस्तो फायदा लिन सकिदैन । ठूला बडाको सल्लाह लिएर दिर्घकालिन फाइदाको लागि लगानी गर्ने समय छ ।
समाजमा आफ्नो खुबि प्रयोग गरि नाम कमाउन सकिनेछ । बिवाद तथा प्रतिष्पर्धामा अरुलाई उछिन्दै तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । अदालति निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् भने सत्रुहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दि आउनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई […]
Posted on November 21, 2020 November 21, 2020 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल मंसिर ७ गते आइतबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर २२ तारीख कार्तिक शुक्लपक्ष अष्टमी तिथीे धनिष्ठा नक्षत्र धु्रव योग भद्रा करण चन्द्रमां कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु अष्टमी व्रत गोरखकालीपूजा गोपाष्टमी मुखअष्टमी बैतडी सिलङ्गा महारुद्रकोटी होममेला (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, […]